Vonjy Voina · Jolay, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Vonjy Voina · Jolay, 2018
Tantara mikasika ny Vonjy Voina tamin'ny Jolay, 2018
Pakistana31 Jolay 2018
R.D. Kongo27 Jolay 2018
Malayzia: Namely ny atsimon'i Malayzia ny onjan-tondradrano faharoa
Azia Atsinanana21 Jolay 2018
Andro vitsy taorian'ny nanombohan'i Malezia ny Visit Malaysia Year 2007, niharan'ny oram-be mivatravatra ny fanjakana Atsimon'i Malezia Johor izay nitarika azy mankany amin'ny onja tondra-drano.
Volana maro taorian'ny faharavàna nateraky ny Rivo-doza Maria, manao fanentanana fambolena hazo fihinam-boa i Dominika, saingy ampy ve izany?
Karaiba08 Jolay 2018
Tsy afaka mividy zezika sy vokatra simika hikarakarana ny toeram-pambolenay ireo tanora tantsaha ary koa aza ny sasany amin'ireo efa tranainy. Nahoana ny tantsaha no tsy afaka karakaraina tsara kokoa ao amin'ity firenena kely ity?
Kenya : Maurine, Miaina Miaraka Amin'ny VIH no Sady Mpikatroka Ao Amin'ny Fikambanana “Repacted”
Afrika Mainty08 Jolay 2018
Ny Repacted , tarika mpanao tantara tsangana eny an-dalambe avy ao Nakuru, Kenya, izay mahazo fanohanana ara-bola efa hatry ny ela avy amin'ny Rising Voices, dia manohy miasa any amin'ireo vohitra manodidina miaraka amin'ny "Teatira Magnet" mba hampahafantatra, indrindra fa ireo tanora, momba ny fisorohana ireo olana ara-pahasalamana toy ny...
Manoloana ny fahafatesana nateraky ny herisetra manerana ny firenena, mitady fiarovana tsara kokoa ny Nizeriana
Afrika Mainty07 Jolay 2018
Tompon'andraikitra tamin'ny fitomboan'ny isan'ny fahafatesana feno herisetra tao amin'ny firenena ny fikomian'ny Boko Haram, ny fifandonana eny amin'ny kaominina, ny asan-jiolahy ary ny endrika fifandonana hafa. Hatramin'ny volana Janoary 2018, olona 1 813 no novonoina nanerana ny fanjakana 17 - avo roa heny noho ny tamin'ny taona 2017 tany Nizeria.
89% n'ny ankizy no nilaza fa efa nampijaliana ara-batana indray andro tao an-tranony ary 30% amin'ireo tovovavy tsy ampy taona no efa no efa manan-janaka